San Thida, Author at Business Centric Network (BCN)
Author: San Thida
Accounting, Accounting Software, MSME Books, User Guide
အဝယ်အမှာစာတင်ပြီး ကြိုတင်ငွေချေပြီး ပစ္စည်းလက်ခံသည့် အခါ စာရင်းသွင်းပုံ
June 16, 2020 June 16, 2020 San Thida
အဝယ်အမှာစာတင်ပြီး ကြိုတင်ငွေချေထားပြီး သတ်မှတ်ရက်မှ ပစ္စည်းရောက်သည့်အခါ စာရင်းသွင်းပုံ အဝယ်အမှာစာတင်ရန်အတွက် Purchase Order ထည့်သွင်းပါ။ အဝယ်အမှာစာ ထည့်သွင်းရန်အတွက် Purchase Order သို့သွားပါ။ Supplier ရွေးပါ။ ဝယ်ယူမည့် item, qty and Unit Price ထည့်ပါ။ ထည့်သွင်းရမည့် အချက်များထည့်သွင်းပြီးပါက Create ကို နှိပ်ပါ။ အမှာစာ အတွက် ငွေပေးချေရန် Receipt and Payment ကို သွားပါ။ ငွေချေသည့် ရက်စွဲ ထည့်ပါ။ ငွေချေမည့် ငွေစာရင်း သို့ ဘဏ်စာရင်းအား ရွေးချယ်ပါ။ စာရင်းခေါင်းစဉ်တွင် Accounts Payable ကို ရွေးပြီး ငွေပေးချေလိုသည့် Supplier အားရွေးပါ။ Unit Price တွင်… Continue reading အဝယ်အမှာစာတင်ပြီး ကြိုတင်ငွေချေပြီး ပစ္စည်းလက်ခံသည့် အခါ စာရင်းသွင်းပုံ
MSME Books (Starter Pack) မေလကုန်အထိ ဝယ်ယူသူများအတွက် ၅၀၀၀၀ ကျပ်သက်သာခွင့်
April 20, 2020 April 20, 2020 San Thida
? မေလကုန်အထိ ဝယ်ယူသူများအတွက် Starter Pack ၅၀၀၀၀ ကျပ်သက်သာခွင့် ?? ?? Covid-19 ကာလအတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် မရှိမဖြစ် အရေးကြီးသည့် စာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို အိမ်မှလုပ်ဆောင်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခု လျှင် အသုံးပြုသူတစ်ဦး အသုံးပြုနိုင်သည့် Starter Pack အား တစ်နှစ်စာ အသုံးပြုခ တစ်သိန်း နှစ်သောင်းကျပ် ပေးသွင်းပြီး ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ ? မေလကုန်အထိ ဝယ်ယူသူများအား Training and Support Fees ငါးသောင်းကျပ် သက်သာခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ?‍??‍? Starter Pack တွင် အသုံးပြုသူတစ်ဦးသာ အသုံးပြုခွင့်ပါရှိပါသည်။ အသုံးပြုသူဦးရေထပ်မံတိုးမည်ဆိုပါက တစ်ဦးလျှင် တစ်သောင်းကျပ်ထပ်မံကောက်ခံပါမည်။ Starter Pack တွင် MSME Books တွင်ပါရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ?? ?‍??‍? အသုံးပြုနည်းသင်တန်းအား online မှ… Continue reading MSME Books (Starter Pack) မေလကုန်အထိ ဝယ်ယူသူများအတွက် ၅၀၀၀၀ ကျပ်သက်သာခွင့်
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့် အထူးကုန်စည်ခွန်သုံးလတစ်ကြိမ် ကြေညာလွှာများအား e-mail ဖြင့်တင်သွင်းနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်
April 20, 2020 April 22, 2020 San Thida
April 19, 2020 April 19, 2020 San Thida
ပြည်ပမှ ဝင်ရောက်ပြီး ရောဂါဖြစ်ပွားသူနှင့် ပြည်တွင်းကူးစက်မှု အခြေအနေ
April 19, 2020 April 22, 2020 San Thida
April 18, 2020 April 21, 2020 San Thida
ပိုးတွေ့ 119 သက်သာ7သေဆုံး5ဧပြီ ၂၀ ရက် ည ၁၁ နာရီ အထိ ပိုးတွေ့ 111 သက်သာ7သေဆုံး5ဧပြီ ၁၉ ရက် ည ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ် အထိ ပိုးတွေ့ 107 သက်သာ5သေဆုံး5ဧပြီ ၁၉ ရက် မနက် ၇ နာရီ အထိ ပိုးတွေ့ 98 သက်သာ5သေဆုံး5ဧပြီ ၁၈ ရက် ည ၉နာရီ အထိ … Continue reading Covid-19 Dashboard
မြို့နယ်အလိုက် Covid-19 Positive လူနာ တွေ့ရှိမှုစာရင်း
April 18, 2020 April 24, 2020 San Thida
April 5, 2020 San Thida
DICA မှာ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတိုင်း မှတ်ပုံတင်ပြီး ၂ လမှာ တကြိမ် နှစ်စဉ် လုပ်ငန်းစတင်တဲ့ နေ့ကနေ ၁၃ လမြောက်မှာ တစ်ကြိမ် Annual Return ကို မဖြစ်မနေတင်ဖို့လို့်ပါတယ်။ Annual Return တင်တာ ဝန်ဆောင်ခ ပါ အပြီးအစီး 70000 ကျပ်ပဲကျသင့်ပါတယ်။ Annual Return မတင်မိပဲ တစ်ရက် ကျော်တာနဲ့ ရက်လွန်ကြေးက တစ်သိန်းကျပ်ပါ။ နောက်ထပ် ၂၈ ရက် ကျော်တာနဲ့ Company က Suspended ဖြစ်သွားပါပြီ။ Company Restoration ပြန်လုပ်ဖို့ အတွက် က တစ်သိန်းကျပ်ပါ။ DICA ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှု အားလုံးအတွက် ကျသင့်ငွေကို online ကပဲ ပေးချေလို့ရပါတယ်။… Continue reading Annual Return Service